काठमाण्डौ । देशकै टप जीवन बिमा कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै करिब १४ अर्ब बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कम्पनीले समीक्षा अवधिमा १३ अर्ब ९१ करोड बढी बिमा शुल्क आर्जन गरेको हो । अघिल्लो वर्षको यही तुलनामा कम्पनीले १० अर्ब ४७ करोड मात्र बिमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । यसरी कम्पनीले बिमा शुल्क आर्जनमा ३२.७९...
प्राइम लाइफ र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सद्वारा घुम्ती बीमा सञ्चालन
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले संयुक्त रुपमा घुम्ती बीमा सेवा सञ्चालन गरेका छन् । बीमा समितिद्वारा जारी शाखारहित घुम्ती बीमा सेवासम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७६ मा व्यवस्था भएबमोजिम ग्राहकलाई घरदैलोमै बीमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले घुम्ती बीमा सेवा आरम्भ गरेको कम्पनीले जनाएको छ । बीमा समितिका...
एशियन लाइफको नाफामा ३१९%, बिमा कोषमा २८.७७% र बिमा शुल्क आर्जनमा ३१.७६% को छलाङ
काठमाण्डौ । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमाससम्ममा १२ करोड १३ लाख बढी खूद नाफा आर्जन गरेको छ । यो भनेको अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३१९ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा यो कम्पनीको नाफा २ करोड ७६ लाखमा सीमित थियो । कम्पनीले दोश्रो त्रैमाससम्म २ अर्ब २८ करोड खूद बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ ।...
रु. ७०० बढी मूल्यको सेयर १०० मै पाइने अवसर आउँदै !
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा प्रतिकित्ता ७६६ रुपैयाँ अन्तिम बिक्री मूल्य भएको सेयर तपाईले रु. १०० मै पाउनुभयो भने ? हजूर यस्तै अवसर आउँदैछ बजारमा । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सलाई धितोपत्र बोर्डले १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निश्कासनको अनुमति दिएको छ । अर्थात यो कम्पनीको सेयर तपाईले बुक क्लोज मितिअघि जति कित्ता किन्नुभयो, सोही...
काठमाण्डौ । प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत छोरी शिक्षा बीमा शिविरमार्फत हालसम्म पाँच हजारभन्दा बढी छोरी बीमित भएका छन् । २०७५ साल माघ १ गतेयता जन्मिएको छोरीलाई प्रदेश सरकारले शिक्षा बीमा गरी दिने घोषणा गरको थियो । सोहीअनुरुप मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै अभियान सञ्चालन गरिए...
एलआईसी संकटमा, नेपालीको अर्बौं रुपैयाँ पनि डुब्ने खतरा
काठमाण्डौ । भारतको सरकारी बिमा कम्पनी एलआईसीका लगानीकर्ताहरु यतिखेर जोखिममा रहेका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा यो कम्पनीको नन परफर्मिङ एसेट्स (एनपीए) अर्थात खराब सम्पत्ति दुईगुनाले बढेको छ । कम्पनीले हालै जारी गरेको वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ मार्चसम्म एनपीएको आँकडा लगानीको अनुपातमा ६.१५ प्रतिशतले बढेको छ । जब कि सन् २०१४/१५ मा...
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले प्रस्ताव गर्यो लाभांश, नगद र बोनस सेयर कति?
काठमाण्डौ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको हिजो आइतबार साँझ बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीहरुलाई चुक्तापुँजी ८८ करोड रुपैयाँ कुल १०.२३ प्रतिशतले हुन आउने ९ करोड ९० हजार रुपैयाँबराबरको लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो...
काठमाण्डौ । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड र ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड तथा कुमारी क्यापिटल लिमिटेडबीच शेयर निष्काशन तथा प्रत्याभूतिसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । आज आइतबार अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार बहादुर खत्री, ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख...
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको खुद बीमाशुल्क आर्जनमा छलाङ, जगेडामा ९४.७४%ले बढोत्तरी
काठमाण्डौ । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा खुद बीमाशुल्क आर्जनमा १३४.६९ प्रतिशतको छलाङ मारेको छ । दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले ७२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको । जुन गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको कम्पनीले ३० करोड ९१ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो । समीक्षा...
सेबोनद्वारा एकैपटक तीन बैंकको ऋणपत्रलाई निष्कासन अनुमति